China Reactive Dyes Printing Thicker LH-3185A warshadeeyayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Yiman Lanhua
Midabada Falcelinta Daabacaadda Dhumucda LH-3185A
LH-3185A waa nooc ka mid ah acrylate polymerized disperssoid, oo lagu dabaqi karo dhumucda daabacaadda falcelinta ee suufka, ramie, flax, fiber bamboo ama daabacaadda wax-soo-saarka.
-LH-3185A waa nooc ka mid ah acrylate polymerized disperssoid, lagu dabaqi karo dhumucyada daabacaadda falcelinta ee suufka, ramie, flax, fiber bamboo ama daabacaadda wax-soo-saarka.
Dhaqso u dhufo
Waxqabadka dareeraha wanaagsan, fududahay in la dhaafo shaashadda daabacaadda.
Karti wanaagsan oo haynta biyaha, duluc fiiqan.
Way fududahay in la dhaqo, gacanta jilicsan ee dharka daabacan.
Loo isticmaalo alginate sodium ama dhumuc ahaan ka dib samaynta koollada.
Muuqashada Dareeraha viscous cad caanaha
Biyo X g
Iska caabi milix 1g
Sodium hexame taphosphate 0.5 - 1 g
Sodium bicarbonate 1 - 3 g
LH-3185A 2-3g (oo loo isticmaalo sodium alginate)
Midabaynta falcelinta Y g
Wadarta 100 g
2. Socodka geedi socodka: Diyaarinta koollada - daabacaadda shaashadda Rotary ama fidsan-qallajinta (100-110 ℃, 1- 2 min) - Uumi (102-105 ℃, 8-10 min) - dhaqid.
Fiiro gaar ah: Soo jeedi walaaqinta ka hor isticmaalka, habka faahfaahsan waa in la hagaajiyaa iyadoo loo eegayo isku dayada hordhaca ah.
1. Soo jeedi in si gooni ah loo miisaamo oo loo milo marka la diyaarinayo xalka, ka dibna siday u kala horreeyaan ugu dar oo si buuxda u walaaq.
Ka dhumuc weyn
Aashitada ka hortagga ulaha saabuunta LH-1308
Daabacaadda Asiidhka Dabiiciga ah ee Saafiga ah ee LH-317H
Shaadhka Laastikada ah Khad Xariir Cad ah, Dheejinta Xakamaynta, Dhuxusha Kala firdhisan-La'aanta, Wakiilka Saabuunta Acrylic, Kaaliyeyaasha Kiimikada, Midabka Heerkulka Sare,